Ogaden News Agency (ONA) – OYSU Holland, OYSU Finland iyo OYSU London oo Qabtay Xuska Maalinta Xasuuqa Ogadeniya.
OYSU Holland, OYSU Finland iyo OYSU London oo Qabtay Xuska Maalinta Xasuuqa Ogadeniya.
Posted by ONA Admin	/ February 18, 2012
munaasabad lagu maamuusayey 18ka feb oo ah maalin taariikhi ah oo ummadda reer ogadenia ugu suntan maalinka xasuuqa shacabka ogadenia ayaa lagu qabtay hoolka shirarka ee magaalada breda, Holland, Caasimada Helisinki ee Finland iyo Caasimada London shirarkaas oo ay soo abaabuleen ururuka dhalinyarada ee Dalka Netherlands, Finland iyo London ayaa ku biloowday jawi degen,
dhalinta Ogadeniya ee Finland ayaa soo qabanqaabisay xuska Febraayo oo kulan aad u xoog badan oo dhamaan jaaliyada Somalida Ogadeniya qeybaheeda kala gadisan kasoo qeyb galeen waxaana kulankan kaalin weyn ka qaatay Jaaliyada Ogadeniya ee Finland. Filimo shirkaas laga qaaday ayaan dib idiinka soo galin doona.
waxaana shirkaasi shir gudoomiye ka ahaa xoghayaha ururka dhalinyarada OYSU ee Netherlan Farxiya xasan Cabdi, waxaa ugu horayntiiba sida caadada ah ku furay aayado quraan ah iyo wacdi diini ah Sheekh Saalax, kadibna waxaa codbaahiyaha lagu soo dhaweeyey Dr Basahiir Yuusuf oo ka hadlay qaabka shacabka ogadenia loo ciqaabo kaasoo ku dheeraaday sharaxaada qaab ciqaabeedka gumaysiga itoobiya uu kula kaco shacabka bir ma gaydada ah ee ogadenia.
Dr Bashiir wuxuu sheegay in La dhalan gadiyo muuqaalka ama jidhka shaqsiga oo lagu badalo jidh dil ilaa uu qofku ka qirto danbiga lagu soo oogay.
In shacabka marka la ciqaabayo Indhaha laga xidho isla markaana laba dilble xadhig loogu adkeeyo si meeshii la doonaba wax blooga dhufto oo uusan isaga arkin nabarka oo uusan uga gaban, garaacaasna uu ku socdo muddo dheer.
In dumarka naasaha lagaga xidho shay culus, ragana xiniinyaha kadibna jiida la yidhaahdo, Maskaxda oo laga garaaco si qofku u noqdo qof xusuusta iyo garashadu ka lunto, iyo waliba bah dilaad, isla markaasna waxaa shacabka ogadeniya la waraystaa waqti dheer oo aan la nasinin.
Shacabka waxaa marka la waraysanayo loo shitaa sigaar oo inta waraysigu socdo kolba meesha nugul lagaga dhajiyaa, waxaana laga garaacaa calaacalaha, raggana xiniinyaha.
Dr Bashiir waxaa hadaladiisii ka mid ahaa in dadla la soo laad-laadiyo iyadoo madaxa loo galiyo musqul, wuxuuna soo qaatay mid ka mida shacabka ogadeniya oo musqul madaxa loo galiyey isagoo laga soo laadlaadiyey tiir dhexe oo ay tigreegu ku samaysteen musqushooda madaxana laga garaacay, kaasoo markii uu miyir doorsoomay lagu soo celiyey godkii ay ku jireen iyagoo wiilal iyo gabdhaba ah, ninkaas oo buu yidhi markii uu indhaha kala qaaday su’aashiisii u horaysay ay ahayd war gabdhihii sidee oo lagay, markii loo sheegay inay noolyihiina, su’aashiisii labaad noqotay madaxu ma igu yaalaa, taasoo shacabkii meesha fadhiyey iyo isaga ruuxiisuba ay ilmada ceshan waayeen.
Dabeecada kale ee uu tigreega ku sheegay waxay ahaayeen.
*dabka waxaa lagu qasbaa inay kaadidooda cabaan ama biyo milix leh
*Hurdada oo loo diido iyo waliba cuntada.
*kufsiga oo dumarka.
*Masuuliyiin ku sheegga gumaysiga oo iyagu kufsiga ku sameeya xeryahooda
*In dumarka ogadeniya qasab lagu guursado haday diidana ay xabsi iyo ciqaab iyo kufsiba ay la kulmayso.
Dr Bashiir wuxuu hadalkiisa ku soo gabagabeeyey Dadku xabsi kama baqaan oo cid walba way ku xisaabtamaysaa in la xidho laakiin waxay ka walbahaaraan mudada ay xidhnaan doonaan inta ay la egtahay.
kulankii la isugu yimid magaalada London ee lagu xusayay Maalinta Xasuuqa Ogadeniya ayaa waxa kawarbixiyay Bashiir Guray Taariikhdii Sanadkii 1994 iyo marxaladihii ay shacabka somalida Ogadeniya ku sugnaayeen. Sidoo kale Waxa goobtaas kasoo jeediyay Hadalo Qiiro leh Halgame Fanaan Yusuf Yare oo ka xog waramay in eega la jooggo waqtigii la xaalmarin lahaa bulshada Somalida Ogadeniya xasuuqii loo geystayna xisaabteedi lagaadhay waqtigii lagu oogi lahaa danbiilayasha. Waxa kale oo goobtaas ka hadashay Shukri Maxamed Iyo Bashiir Sheekh oo ka waramaya sidii looga hortagi lahaa Gumeysiga looguna hiilin lahaa Halganka Ogadeniya.
Dhalinyarada OYSU London waxay garab taaganyihiin Jaaliyada Somalida Ogadeniya ee Johansberg waxayna ku dhiiri galinayaan inay sii xoojiyaan dadaalka ay ugu jiraan inay Maxkamad ku horkeenaan Danbiilayaasha xasuuqa ka geystay Dhulka Somalida Ogadeniya.
Maamul Cusub OYSU Holland.
Intaa ka dib Waxqabadkii ururka isaguna waxaa ka hadlay xaaladda uu wadanku ku suganyahay iyo siyaasadda iyo heerka gumaysiga Itoobiya ku sugantahay Hog w/faafinta Jaaliyadda Holand mudane c/laahi maxamuud oo tilmaamay inuu gumaysigu sii liicayo, iyo Afhayeenkii hore ee ururka OYSU Maxamed cashir cabdi oo ka hadlay wax qabadkii mudadadii gaabnayd ee ururka OYSU jiray oo uu ku sheegay inay qaadeen talaabooyin waawayn oo loo baahnaa.
Intaa kadib waxaa loo gudo galay xaalad 2aad oo Ururku uga faa’iidaystay shirkan oo ahayd in uu ururku doorto Xoghaye iyo gudi cusub maxaana meeshaas lagu doortay inuu noqdo Xoghayaha cusub ee ururka OYSU Holan Mudane maxamed cashir cabdi, halkaasoo ay xilka ku wareejisay xog hayihii hore Marwo farxiya xasan Cabdi,>
Mudane maxamed cashir ayaa markiiba halkaasi ka jeediyey Khudbad gaaban oo mahadnaqa, halka ay marwo fariyana balan qaaday inay la shaqaynayaan gudiga cusub.
Waxaana shirka soo xidhay Xoghayaha cusub Mudane maxamed Cashir Cabdi.